Taabo Bar May Baafin 14 "iyo 16" MacBook Pros | Waxaan ka imid Mac
Taabta Barku way baaba'aysaa 14 iyo 16 ″ MacBook Pros
Waxay umuuqataa in kutiri-kuteen ku saabsan imaatinka New-14 iyo 16-inch MacBook Pros hadda waxay muujinayaan in aysan ku dari doonin Barta Taabashada. Dad badan oo adeegsadayaal ah, baarkani taabashadu maaha mid aad waxtar u leh oo caqli gal ah wuxuu leeyahay kharash, sidaa darteed baabi'inta waxay macnaheedu noqon kartaa lacag yar qofka isticmaala iyo kan Apple.
La taliyayaasha Shayga Bixinta Display, waxay ku tusaysaa hal ama warbixin lagu daabacay warbaahinta sida 9To5Mac in kombuyuutarrada soo socda ee Apple ay imaan lahaayeen la'aanteed Taabashadan Taabashadu waxaa lagu daray oktoobar 2016 kombiyuutarada Apple hadda waa la soo afjari karaa.
Ma isticmaashaa Barta Taabashada?
Xaqiiqdii kuwa adeegsada ee loo adeegsado qaabeynta aaladahaan loo yaqaan 'OLED toolbar' ee laga hirgeliyo dusha sare ee MacBook Pro ma rabaan Apple inay tirtirto, laakiin taasi maahan mid la mid ah qof walba iyo sidaan ku sheegnay bilowga qodobkan haddii ay hoos u dhigayaan qiimaha iyo baabi'inta hubaal in dad badani ku qanacsan yihiin. Dhinaca kale, waa in lagu caddeeyaa sii-deyntii ugu dambeysay maaddaama MacBook Pro ay yihiin tilmaamayaal cad oo ah waxa Apple ay ku sameyn karto barnaamijkeeda soo socda ee MacBook Pro. Kombiyuutarada cusub ee wata M1 processor-ka ayaa ku daraya Taabashada Aqoonsigan ...
Dabcan waxaa jira dad badan oo adeegsadayaal ah oo la qabsaday waxqabadka ay soo bandhigeen barnaamijyada qaar mahadnaqa Touch Bar Habaynta ficilladani waa wax lagama maarmaan u ah adeegsadayaal badan, laakiin waxaa jira kuwa kale oo badan oo aan u baahnayn astaamahan oo runtii aan helin waxqabadka ay awood u leedahay inay bixiso. Xilligan la joogo imaatinkan cusub ee 14 iyo 16-inji ah ee loo yaqaan 'MacBook Pro' weli waa warar xan ah, marka hadalka Bar Bar waa midka ugu dhib yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » MacBook Pro » Taabta Barku way baaba'aysaa 14 iyo 16 ″ MacBook Pros
Maareeyaha Furaha Kaspersky wuxuu abuurayay furayaal si fudud loo qiyaaso
Dukaan kale oo cajiib ah oo Apple Store ah ayaa laga dhisayaa magaalada Toronto